सर्वेक्षण परिणामहरू: मार्केटरहरू महामारी र लकडाउनलाई कसरी जवाफ दिन्छन्? | Martech Zone
लकडाउन सजिलो भएपछि र धेरै कर्मचारीहरू कार्यालयमा फर्किए पछि, हामी कोविड -१ p महामारीका कारण साना व्यवसायहरूले सामना गरिरहेका चुनौतीहरूको बारेमा अनुसन्धान गर्न इच्छुक थियौं, उनीहरूले आफ्नो व्यवसायको विकासका लागि लकडाउनमा के गरिरहेका छन्, उनीहरूले गरेको कुनै अप्स्किलिंग , यस टेक्नोलोजी उनीहरूले यो समयमा प्रयोग गरेको छ, र भविष्यको लागि तिनीहरूको योजनाहरू र दृष्टिकोण के हो।
यस टोली Tech.co उनीहरूले लकडाउनको क्रममा कसरी व्यवस्थित गरेको बारेमा १०० साना व्यवसायहरूको सर्वेक्षण गरियो।
Small०% साना व्यवसाय मालिकहरूले भने कि कोभिड १aमा एक थियो नकारात्मक प्रभाव तिनीहरूको व्यवसाय मा, अझै% 55% भविष्यको लागि धेरै सकारात्मक महसुस गरिरहेछन्
उत्तरदाताहरूको १००% ले लकडाउन प्रयोग गर्दै छन् उनीहरूको व्यवसाय बनाउनका लागि, बहुमतमा फोकस गर्दै मार्केटिंग, ग्राहकहरूसँग जडान हुँदै, र अपस्किलि।.
% 76% छ अपस्किल्ड लकडाउनको क्रममा - एसईओ, सोशल मिडिया, नयाँ भाषा सिक्ने, र डेटा एनालिटिक्सको साथ सिक्नको लागि सब भन्दा नयाँ नयाँ सीपहरू।
सर्वेक्षण गरिएको व्यवसायहरू उद्योगहरूको मिश्रणबाट आएका थिए तर सबैभन्दा सामान्य क्षेत्रहरू B2B सेवाहरू (२%%), सौन्दर्य, स्वास्थ्य र कल्याण (१%%), खुद्रा (१ 28%), सफ्टवेयर / टेक (%%), र यात्रा ( %%)।
व्यापार चुनौतिहरूको सामना गर्नुपर्‍यो
व्यवसायका लागि सबैभन्दा सामान्य चुनौतिहरू थोरै बिक्री (were 54%) थिए, त्यसपछि उत्पादनको सुरुवात र घटनाहरू (% 54%) लाई शेड्यूल गरिसकेका, कर्मचारी र व्यापार लागत (१%%) तिर्न संघर्ष गर्दै थिए, र लगानीका अवसरहरू (१%%) लाई असर गरिरहेका थिए।
सर्वेक्षण गरिएका सबै उत्तरदाताहरूले भने कि उनीहरूले आफ्नो समयलाई व्यावसायीक रूपमा बढाउनको लागि लकडाउन अन्तर्गत प्रयोग गरे।
आश्‍चर्यजनक कुरा के छ भने, बहुसंख्यकहरूले नयाँ सामग्री (offer 88%) र अनलाइन प्रस्तावहरू (%०%) सिर्जना गरेर, अनलाइन घटनाहरू (%०%) सम्मिलित गरेर, उनीहरूले अनलाइन के प्रस्ताव गर्न सक्दछन्, र उनीहरूको डिजिटल मार्केटिंग रणनीतिहरू निर्माण गर्दै, ध्यान केन्द्रित गर्न थालेका छन्। ग्राहकहरू (% 60%), र अपस्किलि ((% 60%) लॉकडाउनमा गर्ने सबैभन्दा सामान्य चीजहरूको रूपमा।
केहीले भने कि उनीहरूसँग केहि थियो सकारात्मक कोविड १ of को परिणामका रूपमा परिणामहरू, अनलाइन बिक्रीमा बृद्धि सहित, मार्केटिंगमा ध्यान केन्द्रित गर्न बढी समय भएको, उनीहरूको मेलिंग सूचीमा वृद्धि, नयाँ चीजहरू सिक्न, नयाँ उत्पादन सुरुवात, र उनीहरूका ग्राहकहरूलाई अझ राम्ररी चिन्नको लागि।
व्यक्तिहरूको विकासको लागि सबैभन्दा सामान्य नयाँ सीपहरू एसईओ (२%%), सोशल मीडिया (१ 25%), नयाँ भाषा (13.२%), डाटा कौशल (3.2.२%), र पीआर (3.2.२%) सिक्दै थिए।
यस अवधिमा टेक्नोलोजीले व्यवसायको सफलतामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। जुम, व्हाट्सएप, र ईमेल स्टाफसँग कुराकानी गर्ने सबैभन्दा साधारण तरिकाहरू हुन्, र सोशल मिडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटि,, वेब कन्फरेन्सिंग, र एक अनलाइन वेबसाइट वा स्टोर भएको सबै टेक्नोलोजीका लाभदायक रूपहरू हुन्। अधिकांशले आफ्नो वेबसाइट अपडेट गर्न लकडाउन प्रयोग गरेका छन्, %०% ले उनीहरूको हालको साइट ट्वीक गर्दै र २%% नयाँ निर्माण गर्दै।
साना व्यवसायका लागि सल्लाह
कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्दा, 90 ०% ले जवाफ दिए कि उनीहरूसँग आफ्नो व्यवसायको भविष्यका लागि एकदमै सकारात्मक वा एकदम सकारात्मक दृष्टिकोण थियो। हामीले जवाफ दिनेहरूलाई यस समयमा अन्य साना व्यवसायहरूलाई सल्लाह दिन आग्रह गर्यौं। यी सब भन्दा साधारण चीजहरू छन् जुन उल्लेख गरिएको थियो:
पिभोट र प्राथमिकता दिनुहोस्
तपाइँ केमा राम्रो हुनुहुन्छ प्राथमिकता दिँदै र के कामहरू थाहा पाउँदै धेरै उत्तरदाताहरू द्वारा उल्लेख गरिएको थियो:
यस समयमा प्रयोग गर्नुहोस् तपाईलाई पहिले नै राम्रो भएका चीजहरूलाई ठीक गर्न।
स्ट्रिमलाइन PR बाट जोसेफ हेगेन
तपाईंको शक्ति मा फोकस, धेरै प्रयोग नगर्नुहोस्। ग्राहक अधिग्रहणको सर्तमा तपाईका लागि के काम गर्दछ थप काम गर्नुहोस् र त्यसमा केन्द्रित हुनुहोस्। हाम्रो लागि, त्यो ईमेल मार्केटिंग भएको छ र हामी यसमा दोब्बर भएका छौं।
Ringblaze को डेनिस Vu
भविष्यमा लागत कटौती गर्ने र लगानी गर्ने बिचमा सन्तुलन प्राप्त गर्नुहोस्। यसलाई संलग्नता, विश्वास र वफादारी निर्माण गर्ने अवसरको रूपमा हेर्नुहोस्।
कोचिंग सेवा वास्तवमा सारा मूल्य
नयाँ चीजहरूको परीक्षण गर्नुहोस् र फुर्सद हुनुहोस्
अरूले भने कि अब फुर्सद हुनको लागि उत्तम समय हो, र तपाईंको दर्शकहरूमा नयाँ चीजहरूको विकास र परीक्षणको लागि, विशेष गरी अनिश्चितताको समयमा।
चपलता कुञ्जी हो, चीजहरू यति द्रुत गतिमा चलेका छन् कि तपाईंले समाचार र प्रचलनहरूलाई हेरी राख्नु पर्छ, र द्रुत प्रतिक्रिया दिनुहोस्।
BOOST & Co को लुटि बोरेहम
एक कदम पछाडि जानुहोस् र रणनीति बनाउनुहोस्, तपाईंको समयलाई बुद्धिमानीपूर्वक प्रयोग गर्न। तपाईंको अवस्थित ग्राहक आधारमा नयाँ प्रस्तावहरूको परीक्षण गर्नुहोस्, तिनीहरूलाई ट्वीक गर्नुहोस्, र त्यसपछि अपूर्ण पहिलो चरण गर्नुहोस्।
थॉमस जडानबाट मीकल थॉमस
अवसरहरूको खोजी गर्नुहोस् जुन परिस्थितिमा अद्वितीय छ। हामी कम्पनी पार्टनरहरूबाट नि: शुल्क भवन निर्माण सल्लाह प्रदान गरेर लकडाउन अवधिलाई अधिकतम बनाइरहेका छौं।
Allcott एसोसिएट्स LLP को किम Allcott
पुग्नुहोस् र तपाइँका ग्राहकहरूलाई चिन्नुहोस्
तपाईंको ग्राहकलाई चिन्ने र बुझ्ने महत्त्व र उनीहरूका आवश्यकताहरू व्यावसायले दिएको सल्लाहमा निकै क्रप भयो। व्यवसायहरूले लकबडाउन प्रयोग गर्न ग्राहक ग्राहक संरक्षण रणनीति निर्माणमा वास्तवमै केन्द्रित गर्न सक्दछन्।
यो प्रतिरोधात्मक लाग्न सक्छ तर वास्तवमा तपाईंको कोठा लक गर्नुहोस्, तपाईंको पूर्ण आदर्श ग्राहक परिभाषित गर्नुहोस् जसको लागि तपाईं परिपूर्ण हुनुहुन्छ। उनीहरू र उनीहरूको वर्तमान चुनौतीको बारेमा सोच्नुहोस्। यदि तपाईं तिनीहरूको जुत्तामा हुनुहुन्छ भने तपाईं अहिले के खोज्दै हुनुहुन्छ? त्यसोभए निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको उत्पादन वा सेवा स्पष्ट रूपमा समाधानको लागि कुरा गर्दछ। हामीले हामीसँग कुरा गर्दा गल्ती गर्छौं जब हामीसँग र हाम्रो ग्राहकहरूसँग कुरा गरिरहनुपर्दछ। " भने
कार्यकारी कोचिंगको किम-एडले प्लेट्स
B2B परिप्रेक्ष्यमा, मलाई लाग्छ कि यो महत्वपूर्ण छ तपाईंको ग्राहकहरूसँग सम्पर्क कायम राख्नु र उनीहरूलाई बुझ्न दिनुहोस् कि तपाईं यस चुनौतीपूर्ण अवधिको अवधिमा उनीहरूलाई मद्दत गर्न र समर्थन गर्न त्यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसोभए त्यो संकटमा नेभिगेट गर्न सहयोगी सामग्री उत्पादन गरिरहेको छ, वा ग्राहक सेवाहरूको आश्वासन दिईन्छ कि सामना गर्न मद्दतको लागि, संवाद चाँडै खोल्न र आफ्नो ग्राहकसँग कुरा गर्न जारी राख्न महत्त्वपूर्ण छ।
टेक कम्पनी मेडियसको जोन डेभिस
कुरा गर्नुहोस् र आफ्नो ग्राहकहरु संग कनेक्शन बनाउनुहोस्। उनीहरूको अवस्थालाई सहयोग गर्न तपाईले के गर्न चाहेको छ पत्ता लगाउनुहोस्। अहिले र भविष्यको लागि राम्रो हुने सामग्री सिर्जना गर्न यो समय प्रयोग गर्नुहोस् किनकि यस अवधि अवधि सधैको लागि हुँदैन।
अनलाइन स्टोरको Calypso गुलाब, Indytute
मार्केटिंगमा फोकस गर्नुहोस्
आर्थिक मन्दीको समयमा कम्पनीहरूले प्राय: कटौती गर्नु पर्छ। अक्सर यो मार्केटिंग र विज्ञापन बजेट हो। जहाँसम्म, धेरै उत्तरदाताहरूले तपाईंको बजार सहीको निरन्तर महत्त्वलाई औंल्याए।
अनलाइन कुराकानी गर्न, तिनीहरूको सामाजिक मिडिया प्रयोग गर्न, र नयाँ व्यक्तिहरूसँग जडान गर्न व्यक्तिहरू पहिलेभन्दा अझ खुला छन्। एक राम्रो र प्रभावकारी वेबसाइटको विकास पहिले भन्दा बढि महत्त्वपूर्ण छ।
जुलिया फेरारी, वेब डिजाइनर
अहिले बढ्न कोशिश गरेर पछाडि हट्नुहोस् र सोच्नुहोस् कि 'अब के कुराकानी सुरु गर्न सक्छु जुन सम्भावित ग्राहक-कुराकानीमा परिपक्व हुन सक्छ -8-१० महिनामा?'। लकडाउन दीर्घकालीन मार्केटिंग परियोजनाहरूमा काम गर्ने राम्रो अवसर हो।
WOAW ब्रान्डिंग एजेन्सीको जो बाइन्डर
एक राम्रो वेबसाइट कुञ्जी हो। यसलाई तपाईको व्यक्तिगत ब्रान्ड बनाउनुहोस्। विश्वास निर्माण गर्न ग्राहकहरूको प्रशंसापत्र देखाउनुहोस् र तपाइँ के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर तपाईंलाई देखाउँदछ। टेक्नोलोजी प्रयोग गर्नुहोस् (भिडियो कन्फरेन्स र स्क्रिन सेयरहरू) अन्तर्क्रिया गर्न र ग्राहकलाई प्रस्तुत गर्न। अपरिचितहरू अनलाईन व्यापार गर्नका लागि बढी सहज हुँदै गइरहेका छन्। आफ्नो अनुहार देखाउनुहोस् र तिनीहरूको समस्याहरूको समाधान प्रदान गर्नुहोस्। यदि तपाईंसँग विशेषज्ञता छैन वा कुनै खास क्षेत्रमा सहयोग चाहिएको छ भने, भर्चुअल सहायक खोज्नुहोस्। हामी ब्लग लेखन, ग्राफिक्स सिर्जना, र CRM प्रबन्धनका लागि सहयोगीहरू प्रयोग गर्छौं।
अब्राम बीमा समाधानको क्रिस अब्रामहरू
ग्राहक प्रतिधारण रणनीतिहरू
टैग: lockdownsमार्केटिङमार्केटिङ रणनीतिमहामारी